Mayelana NATHI | Hebei Ximai Imishini Equipment Equipment Co., Ltd.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-20 ithuthukiswa, i-Hebei Ximai Machinery isikhule yaba ngumkhiqizi wezinsimbi ophelele wokhonkolo. Imikhiqizo yethu ihlanganisa izigaba ezi-4, izigaba ezingaphansi ezingama-30 nezinkulungwane zezinto ezizodwa. Inhlokodolobha ebhalisiwe yeXimai ingama-yuan ayizigidi ezingama-75, ihlanganisa indawo engama-94, 600 square metres, futhi njengamanje iqashe abangaphezu kwama-350, kufaka phakathi onjiniyela abaphezulu abayi-13, ama-27 R & D / isiqiniseko sekhwalithi / abasebenzi bezobuchwepheshe, abangaphezu kuka-240 abakhiqizi bokukhiqiza, nabangaphezu Abasebenzi abangama-60
UXimai unama-workshops wokukhiqiza ayi-13 esewonke, afaka i-Cutting workshop, i-CNC machining workshop, i-Derusting workshop, i-workshop ye-Welding, i-Painting workshop. Ifektri yethu inezinsizakusebenza eziningi zobungcweti ezinkulu, njenge, imishini yokwelashwa yokushisa okuvama kakhulu, imishini yokushisela okushisa okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo, umshini wokubacindezela, umshini omkhulu we-CNC wokugaya nokunye. Singakhipha amapayipi okukhonkolo kokhonkolo, okufakwa kanye nemishini yokusiza ye-PM, SCHWING, CIFA, JUNJIN, SANY, Zoomlion, Foton, nabanye
Kusukela ngo-1995, imikhiqizo kaHebei Ximai ithengiswe emazweni angaphezu kwezi-80 kanye nasezifundeni zomhlaba. Ukulandela umthetho wokuthi "ikhasimende kuqala" kanye "nomkhiqizo wokuqala", u-Hebei Ximai wakha uhlelo oluphelele lokuhlinzeka ngamakhasimende. Ngekhwalithi enhle, intengo enengqondo, indlela yokukhokha eguquguqukayo, ukulethwa ngesikhathi nesevisi yamakhasimende ephelele, u-Hebei Ximai uthola idumela elihle phakathi kwamakhasimende.
Uma u ...
1. Ufuna abakhiqizi be-OEM / ODM kule mboni.
2. Udinga umuntu ongakhiqiza okufunayo futhi abe nomklamo wangokwezifiso oprintiwe kusimo sakho.
Ngemuva kwalokho insizakalo yethu ye-OEM / ODM ingeyakho!
1. Ufuna ukuthenga i-oda lesampula kuqala.
2. Thenga i-oda eligcwele ngemuva kokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Ngemuva kwalokho insizakalo yethu ye-Sample Order ingeyakho!
1. Ungathanda ukuthola eminye imininingwane ngenkampani yethu.
2. Singathanda ukuvakashela eChina futhi sinentshisekelo yokusebenza nathi.
Ngemuva kwalokho insiza yethu yeFektri Tour ingeyakho!